अमेरिका–चीन तनाबका बीच ट्रम्पले गरेको दाबी कति वास्तविक ? के अमेरिकासँग अत्यन्तै शक्तिशाली मिसाइल छ ? | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more अमेरिका–चीन तनाबका बीच ट्रम्पले गरेको दाबी कति वास्तविक ? के अमेरिकासँग अत्यन्तै शक्तिशाली मिसाइल छ ?
अमेरिका–चीन तनाबका बीच ट्रम्पले गरेको दाबी कति वास्तविक ? के अमेरिकासँग अत्यन्तै शक्तिशाली मिसाइल छ ?
जेठ ६ गते, २०७७ - १२:०६
काठमाडौं । कोरोना भाइरसलाई लिएर चीन र अमेरिकाबीच तनाब बढिरहेको बेला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चीनलाई चेतावनी दिँदै आफुँसँग अत्यन्तै शक्तिशाली मिसाइल भएको दाबी गरेका छन् । उनले अमेरिकाको साथमा रुस र चीनसँग भएको मिसाइलभन्दा १७ गुणा शक्तिशाली मिसाइल भएको दाबी गरेका छन् ।
ट्रम्पका अनुसार अमेरिकासँग भएको मिसाइल सुपरसोनिक मिसाइल हो । चीनबाट बढ्दो खतरालाई देख्दै अमेरिकाले सुपरसोनिक मिसाइल तयार गरेको बताएको छ ।
तर, पेन्टागनको रिपोर्टमा अमेरिका कमजोर
तर, यसअघि पेन्टागनको रिपोर्ट सार्वजनिक भएको थियो, जसमा ताइवानलाई लिएर अमेरिकाले युद्व गरेमा अमेरिका नराम्रोसँग हार्ने कुरा उल्लेख छ । अमेरिकाको रक्षा विभाग पेन्टागनले चीनसँग जोडेर २०२० मा एक विशेष रिपोर्ट तयार गरेको थियो । जसमा अमेरिका एशिया प्यासिफिक (इण्डो प्यासिफिक नाम दिइएको) क्षेत्रमा चीनको साथ कुनै युद्व गरेको खण्डमा अमेरिकाले नराम्रो हारको सामना गर्नुपर्ने बताइएको छ ।
रिपोर्टमा अमेरिकाको कमजोर अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । पेन्टागनको रिपोर्टमा पछिल्लो दुई दशक अमेरिकाले मध्यपूर्वी क्षेत्र र अफगानिस्तानमा मात्रै ध्यान केन्द्रित गर्दा इण्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा चीनले फाइदा उठाएको र प्रभाव बढाएको उल्लेख छ ।
रिपोर्टमा इण्डोप्यासिफिक क्षेत्रमा चीनले लामो दुरी, छोटो दुरी र मध्यम दुरीका मिसाइल बनाएको बताइएको छ । साथै एयरक्राफ्टको विकास बढाएको र आर्टिफिसियल आइलैण्डहरु तयार गरिरहेको उल्लेख छ ।
ट्रम्पको भनाई तर्साउने बाहान मात्रै
ट्रम्पले सुपरसोनिक मिसाइल छ भन्नु तर्साउने बाहान मात्रै भएको विश्लेषण गरिन थालेको छ । अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयकै रिपोर्टमा अमेरिका कमजोर हुँदै गरेको सार्वजनिक भईरहेका बेला चीन र रुसलाई धम्क्याउन ट्रम्पले मिसाइलको कुरा उठाएको बताइएको छ ।
यसअघि सार्वजनिक भएको अमेरिकी गुप्तचरको रिपोर्टमा पनि चीनसँग के–कस्ता हतियार छन् भन्ने नै विश्वलाई थाहा नभएको उल्लेख थियो । चीनले पछिल्लो समय गोप्य रुपमा धेरै नयाँ हतियारहरु विकास गरिरहेको उल्लेख छ । एजेन्सीबाट
जेठ ६ गते, २०७७ - १२:०६ मा प्रकाशित